Voatavo fanosotra voatavo | Sakafo Nutri
La voatavo Izy io dia sakafo manome tombontsoa ara-pahasalamana marobe, toy ny fibre na fananana diuretic. Izy io dia azo lanina amin'ny fomba samy hafa, fa ny fomba fahita mahazatra sy haingana indrindra dia ny crema. Ny voatavo voatavo dia iray amin'ireo fomba fahandro mahazatra indrindra mahasalama sy mora atao.
Voatavo 450 grama,
ovy iray na roa,
Hanomanana ny crème voatavo, tokony manamboatra vilany misy rano iray litatra ianao, ary manafana azy avy eo. Avy eo sasana tsara ny voatavo ary tapatapahina ho cubes kely.
Hanohizana ny fanomanana ny voatavo voatavo, tapaho ny ambony sy ny farany karaoty, voahitsakitsaka ary tapatapahina. Tsy mila manify be izy ireo, mety ho sentimetatra ny hateviny. Toy izany koa no atao amin'ny boka, tapahina izy io.
Voaso sy voakapa koa izy ireo ovy. Rehefa mangotraka ny rano ao anaty vilany dia ampio ireo legioma notapahina. Sotro roa oliva menaka ary sira kely. Avy eo, fonony ny vilany ary andrahoy mandritra ny 25 minitra amin'ny hafanana antonony. Raha te-hanao crème voatavo somary maivana kokoa ianao dia azonao atao ny manova ovy ho an'ny ronono skim na ronono soja, raha tsy mahazaka lactose ianao.
Rehefa rehetra legioma Masaka izy ireo, esorina amin'ny hafanana, apetraka ao anaty blender mandra-pahazoana crème malefaka sy homogène.
La voatavo fanosotra efa vonona ary vonona hotompoina. Raha te-hanampy singa haingon-trano ianao dia afaka manampy fromazy kely mba hanome azy io hikasika hafa. Voatavo voatavo dia a Platon matsiro izay tian'ny rehetra, ao anatin'izany ny tanora sy ny zanaky ny trano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Resipeo mahasalama » Voatavo fanosotra voatavo
Manampia dipoavatra mavokely amin'ny loviao